Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Cusbitaalka Shiinaha - Caafimaadka Baili
Guriga > Alaabta > Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka > Agabka Isbitaalka
Qalabka cisbitaalka, qayb ka mid ah qalabka caafimaadka, qalabka garashada tooska ah, Internet of Things qalabka macluumaadka iyo alaabta software ee la xidhiidha, iyo alaabta tamarta-badbaadinta ee la xidhiidha;
Qalabka cisbitaalka, golaha daawaynta, golaha qashin-qubka, gaadhiga, alwaaxyada iyo alaabta biraha cilmi-baadhista iyo horumarinta, wax-soo-saarka, iibinta, rakibaadda, dayactirka;
Qalabka cisbitaalka, qalabka iyo agabka xafiisyada, xarumaha caafimaadka iyo caafimaadka, iyo alaabada elektiroonigga ah ee caafimaadka; Mashiinnada qalabka wax lagu baro, agabka waxbarashada iyo habaynta saadka, suuqgeyn; Wax soo saarka iyo iibinta saxanadda.
Kursiga Daawaynta iyo Sawirka Dhiiga
Sawirka Dhiiga iyo Kursiga Daawaynta: Badbaado iyo raaxo leh, naqshad ergonomic ah, cudud gacan-fudud leh oo cudud u qaabaysan, badelada korantada iyo gacanta lagu hagaajin karo, iyadoo la isticmaalayo agab deegaan ahaan u wanaagsan. Naqshad bani-aadminimo lagu sameeyay, wadar ahaan saddex qaybood oo matoor ah, afar wax-is-xajis ah, koronto laba-gees ah, oo leh dib-u-dejin fure ah, baal shoog, barkimo iyo hawlo badelo.
Diiwaanada Kalkaaliyeyaasha iyo Wareegyada Ward
Diiwaanada Kalkaalinta iyo Wareegyada Ward: Wareega ward waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan uguna badan ee loo isticmaalo shaqada caafimaadka. Waa xiriir muhiim ah si loo xaqiijiyo tayada caafimaadka iyo tababarida shaqaalaha caafimaadka. Shaqaalaha caafimaadka heer kasta oo ay yihiin waa in ay si miyir leh uga qayb qaataan oo ay si dhab ah u qaataan. Inta lagu jiro nidaamka wareegyada waadhka, bukaanadu waa inay si buuxda u diyaar garoobaan, yeeshaan dabeecad halis ah, sameeyaan diiwaanno faahfaahsan, oo si adag u hirgeliyaan "Nidaamka Daaweynta Caafimaadka ee Ilaalinta" si looga fogaado waxyeelada ama dhaawacyada soo kabashada bukaanka. Inta lagu jiro wareegyada ward, waa inaad dami taleefoonkaaga gacanta, isku day inaadan ka jawaabin wicitaanada dibadda, hana ka hadlin arrimaha aan......
Miiska shaqada ee caafimaadka iyo saxanka
Miiska Shaqaynta Caafimaadka iyo Wasaqda: Wasaqda waxaa loo isticmaalaa habka biyo-mareenka si loo ururiyo gaaska ama waxaa loo isticmaalaa in lagu qabto xaddi badan oo biyo ah waxaana loo isticmaali karaa weelka lagu dhaqo, qalabka cuntada, alaabta ugu muhiimsan waa birta aan fiicnayn. Marka laga soo tago birta aan nadiifka ahayn, waxaa jira dhaldhalaalka birta, ceramics iyo wixii la mid ah. Habka hargabku wuxuu u qaybsan yahay afar tillaabo: alxanka iskala bixinta, daaweynta dusha sare, daaweynta cidhifyada iyo buufinta hoose. Cistern waa inay ogaysiisaa ilaalinta iyo dayactirka.
Golaha Wasiirada iyo Golaha Kaydka Caafimaadka
Kaydinta Caafimaadka Golaha Wasiirada iyo Golaha: Gidaarka looxa isku dhafan wuxuu ka samaysan yahay walxo isku jira oo horumarsan sida walxo dahaarka. Miisaankeeda fudud, xoogga sare, dahaarka kulaylka wanaagsan, caabbinta daxalka, anti-gabowga, aboorka, aan sunta ahayn, ma aha caariyaysi, waxay muujin kartaa heerkeeda heerkul aad u hooseeya.
Shaashadda Caafimaadka: Inta badan buluug, xirfaduhu waxay xannibaan sirta iyo neefsashada, waxay ilaalin kartaa sirta bukaanka. Ka hortag siidaynta sirta martida. Waxa loo isticmaalaa waaxyo bukaan-socod oo kala duwan.
Laba Tallaabo oo ah Qalabka Cagta ee Bukaanka Birta Aan-Aabaha ahayn ee Caafimaadka
Labo Tallaabo Caafimaad oo Bir Awaamiir-la'aan ah oo Cagaha Bukaanka ah: Saxaro hoose oo taageerta cagaha oo sidoo kale loo isticmaali karo fadhiga. Inta badan waxay leedahay baallaha sariirta ama baallaha fadhiga.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Agabka Isbitaalka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Agabka Isbitaalka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Agabka Isbitaalka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.